Warning: getimagesize(article_uploaded_files/f8020bhaktaman_shrestha.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home4/b1soft/public_html/nepalkoreanews.com/page.php on line 154
तपाईं अपहरण परेपछि पूरै देश हल्लियो, खासमा तपाईं अपहरणमा कसरी पर्नुभयो ?
चितवन अस्पतालबाट अप्रेसन सकेर हाकिमचोकमा नजिकै आएको थिएँ । त्यतिवेला रातिको साढे १० भएको थियो होला । दुईवटा काला रंगका गाडी र मोटरसाइकल मेरो कारअगाडि आएर रोकिए । अनि तल ओर्लेर किन गाडी ठोक्काएको भनी उल्टै हपारे । मैले मेरो गल्ती होइन भनेँ । त्यसपछि एक्कासि चारजना मानिस मेरो गाडीमा चढे र आँखामा कालोपट्टी बाँधे । कन्चटमा बन्दुक तेस्र्याएका पनि थिए । कहाँबाट को आइलाग्यो यस्तो, मैले केही बोल्न नै पाइनँ । गाडीमा चार घन्टाभन्दा बढी समय हिँडाए, केही बोलेनन् । कता लगे भन्ने पनि थाहा पाइनँ ।
गाडीबाट कति वेला ओराले ?
ठ्याक्कै थाहा भएन । आँखामा पट्टी बाँधेको कारणले घडी हेर्न सकिनँ ।
अपहरणकारीले आफ्नो उद्देश्यबारे त केही त बताए होलान् नि ?
उनीहरूले प्रस्टै भने, 'राजधानीभन्दा बाहिरको चर्चित मान्छे तपाईं भन्ने थाहा पायौँ ।' अनि क्यान्सर अस्पतालमा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने उनीहरूलाई लागेको रहेछ । उनीहरूले मलाई अनुसन्धान गर्न र सरकारलाई (हिन्दू जनता) पार्टीको अस्तित्वबारे जानकारी दिनका लागि अपहरण गरेको भनेका थिए । उनीहरूको भनाइ थियो, 'हामी हिन्दूराज्य स्थापना गर्न चाहन्छौँ, धर्मनिरपेक्षताको विरोधी हौँ, हाम्रो लडाइँ जारी छ, तपाईंले साथ दिनुपर्छ ।'
राजधानीबाहिर त अरू पनि चर्चित मान्छे छन्, तपाईं नै अपहरणमा किन पर्नुभो त ?
त्यो त मलाई थाहा भएन । उनीहरूले किन मलाई नै चर्चित देखे । होला क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक भएको कारण । उनीहरूले मलाई यसै भनेका थिए ।
फिरौती रकम कति मागे र कसरी दिनुभयो ?
रकम मसँग एक पैसा पनि मागेनन् । १९ दिन उनीहरूसँग बस्दा एक दिन पनि रकम मागेनन् । पैसाको त कुरै भएन । सरकारलाई पार्टीको अस्तित्व देखाउनका लागि अपहरण गरेका हुन् रे । अर्का कुरा, क्यान्सर अस्पतालमा भ्रष्टाचार भएको कुरालाई अनुसन्धान गर्नका लागि पनि अपहरण गरेको मलाई भन्थे । अनुसन्धानले गर्दा (रिहाइमा) ढिलो भएको हो । ढुक्क हुनुहोस् तपाइंलाई हामी मार्दैनौँ भनेर पटक-पटक भन्थे । पैसाको कुरा कहिल्यै गरेनन् ।
पैसाका लागि नभए यति लामो समयसम्म अपहरण गरेर राख्नुको अर्थ पनि देखिँदैन नि ? होइन र ?
मैले भने नि मसँग उनीहरूले पैसाको एकपटक पनि कुरा गरेनन् । उनीहरूको भनाइलाई आधार मान्न हो भने अस्पतालमा भ्रष्टाचार भएको छ रे, त्यही पत्ता लगाउनका लागि अपहरण गरेका रै'छन् । अनुसन्धानमा मेरो केही गल्ती नपाएपछि मलाई छोडेको उनीहरूले बताए ।
हल्ला त तपाईंले फिरौती रकम बुझाउनुभयो भन्न छ नि ?
होइन । पैसाको बार्गेनिड भएको भए म उहिल्यै छुट्थेँ होला । मेरो ज्यान जोगाउनका लागि परिवारले पैसाको त जोहो गरिहाल्थे नि, होइन र ? यो हल्लामा कुनै सत्यता छैन ।
यसबीचमा घरमा फोन सम्पर्क भएन ?
(नजिकै बसेकी श्रीमती शिलुतिर हेर्दै) कतिपटक भयो रे । अँ दुईपटक उनीहरूले सम्पर्क गरेका थिए । म जीवित्तै छु भनेर जानकारी दिन । अरू त केही कुरा हुन पाएन ।
तपाईंको अपहरण प्रकरण माओवादी पार्टीसँग जोडिएर आयो नि । कतै जनता दलको नाममा माओवादीले त अपहरण गरेका होइनन् ?
होइन । म आफैं माओवादी पार्टीको मान्छे । अनि मेरै पार्टीले मलाई किन अपहरण गर्थ्यो र । माओवादीले होइन । मलाई अपहरण गरेको नेपाल हिन्दू जनता पार्टीले हो ।
नौलो नाम भन्नुभयो अपहरणकारी समूहको । कि यही भन्नु भनेर दबाब दिएका छन् ?
होइन । मलाई यही भन्नु भनेर कसैले पनि दबाब दिएका छैनन् । यो पार्टीको बारेमा मैले पनि पहिलोपटक सुनेको हुँ । अपहरण गर्नुअघि मलाई यो पार्टीको बारेमा कुनै पनि जानकारी थिएन ।
अपहरणकारीले के गर्ने भनेर निर्देशन दिएका छन् ?
अँ हँ केही निर्देशन दिएका छैनन् ।
तपाईंलाई अपहरण गरेपछि कति ठाउँमा राखे ?
एकै ठाउँमा राखेनन् । एक दिन दुई-चार मिनेट हिँडाएर अर्कै ठाउँमा लिएर जान्थे । अझ घुमाएर फेरि त्यही ठाउँमा लिएर आउँथे कि जस्तो लाग्छ, त्योचाहिँ जानकारी भएन । आँखामा पट्टी बाँधेको कारण कता हो कता मेसो नै पाइनँ । तर केही समयचाहिँ हिँडाउने गर्थे ।
तपाईंलाई कस्तो व्यवहार गरे उनीहरूले ?
मलाई सधै सम्मान गरेर बोलाउँथे । कहिले डाक्टरसाब भन्थे । कहिले सर भन्थे । भोक लाग्यो होला पनि भन्थे । र, भएको खानेकुरा मीठो-नमीठो ल्याएर दिन्थे । म पनि खान्थेँ । सधैं एउटै डर लागिरहन्थ्यो- बन्दुक पड्काउने हुन् र मलाई मार्ने हुन् कि भनेर । तर, बन्दुक पड्काएको आवाज पनि सुनिनँ । जति दिन उनीहरूसँग बसँे निकै तनावमा बसेँ । अब त मरिने हो कि भनी घरपरिवार, साथीभाइ सबैलाई सम्झेर बस्थेँ । उनीहरूले तपाईंलाई मार्नका लागि यहाँ ल्याएको होइन भनेपछि केही आशा पलाएर आउँथ्यो । म आत्तिएर सोच्थेँ- अरूको पञ्जामा छु । जिन्दगी यस्तै हो । अब र्फकेर घर पुग्दिनँ होला ।
तपाईंको कार पोखरामा र बि्रफकेस घोप्टेभीरमा फालेको जानकारी छ ?
छ । उनीहरूले नै मलाई भनेका थिए- तपाईंको कार घरमा पुगिसक्यो । बि्रफकेस पनि नारायणी नदीको छेउमा फालेका छौँ । नआत्तिनूस् एक-दुई दिनमा त्यो पनि घर पुग्छ भनेर भनेका थिए ।
त्यसो भए त अरू पनि धेरै कुरा गरे होलान्, अरू के-के भने ?
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने उनीहरूको उद्देश्य रहेछ । केही समयपछि हिन्दूराष्ट्र निर्माणका लागि मोर्चाबन्दी गरेर सार्वजनिक हुने उनीहरूको योजना रहेछ । यही क्यान्सर अस्पतालभित्र पनि उनीहरूका मान्छे छन् रे । यसै भनेका छन् । अरू त खासै केही कुरा भएन मसँग । मैले डरले धेरै कुरा सोध्न पनि सकिनँ ।
तपाईंलाई अन्तिममा कसरी छाडे ?
तीन दिनअघि नै उनीहरूले जानकारी दिएका थिए मलाई छाड्ने भनेर । राति चितवनमा लगेर छोड्छौँ भनेका थिए । म केही बोलिनँ । राति ४ घन्टाजति गाडीमा ल्याएर छोडे । गाडीबाट ओर्लने वेलामा हात मिलाएर बिदाइ पनि गरे । गल्ती भएमा क्षमा है डाक्टरसाब भनेका थिए । वरिपरि हाम्रा मान्छे छन्, ढुक्क हुनुहोस् तपाईंलाई केही हुँदैन पनि भनेका थिए । गाडीबाट ओर्लने वेलामा आधा घन्टा आँखाको पट्टी नखोल्न भनेका थिए । केही समयपछि आँखाको पट्टी खोलेँ । पर बाटोमा बत्ती बलेको देखेँ । वरिपरि पहाड भएकोले निकै डर लाग्यो । चितवन नै होइन कि जस्तो पनि लाग्यो । र, बत्ती बलेको स्थानमा गएँ । त्यहीँको एकजना भाइले घरमा भाइलाई फोन लगाइदिनुभयो र घर आएँ ।